ညိမ်းညို: November 2009
ခွဲချင်ခွဲပလေ့စေ ငါတို့နေတာ တောင်ထိပ်မှာ
မလိမ်မိုးမလိမ်မာနဲ့ ငိုငိုနေရတာ ဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့
ကဗျာရေးဖို့ အချက်အလက်တွေဟာ အတော်ပဲများပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနေ့ရက်တွေကို မပျော်ရွှင်ဘူးခရေ။
တောပန်းကလေးတွေတောင် နေရောင်အောက်မှာ သနပ်ခါးအဖွေးသားရှိပါလျက်
အားကိုးရာရွှေတောင်ကြီး ပြိုလေပြီ ဘာဘာညာညာ
သစ္စာတောင်ကြီးပြိုရင်သာ အားလုံးပြိုလဲကုန်တာပါ ခရေ...ရာ။
ခွဲချင်ခွဲပလေ့စေ ငါတို့နေတာ တောင်ထိပ်မှာတဲ့
ရယ်စရာဒီအသောလေးလည်း လေထဲမျောသွားပြီ ခရေ...ရေ။
ရက်ပေါင်း ၈၄၀စာ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ နှုတ်ထွက်စကား
ခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားအောင် နင်ဘယ်အတတ်နဲ့ ဖျောက်ပစ်လိုက်တာလဲဟာ။
သူငယ်တန်းကျောင်းသားတုန်းက ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မနက်တိုင်းကောက်ခဲ့ဖူးတဲ့
ခရေပွင့်တွေကို သတိရတယ်။ ခရေပင်ကြီးကို သတိရတယ်။
သာမာန်အားဖြင့် ကဗျာတွေကို အောက်ခြေရှင်းတမ်း မရေးဖြစ်ပါဘူး။
ရက်ပေါင်း၈၄၀စာ ယုံထင်ကြောင်ထင် ကိန်းဂဏာန်းတစ်ခုအတွက်
အမှန်တကယ်လည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သတိရဖြစ်တဲ့ ခရေပင်ကြီးနဲ့ ‘ကာ’ လိုက်ပါတယ်။ ဆင်ချင်တဲ့အ၀တ်အစားတွေဆင်ထားပြီး လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ စာခြောက်ရုပ်တွေကိုလည်း တဆက်တည်း လွမ်းဆွတ်မိပါကြောင်း။
Posted by ညိမ်းညို at 03:009comments Links to this post
စိတ်ညစ်လို့ မြစ်ကမ်းနံဘေး သွားထိုင်တဲ့လူတစ်ယောက် သပွတ်အူမျှောလာတာနဲ့ ကြုံရဆိုလားဘာလား။ နဲနဲ ပြန်ကိုးကားချင်တယ်။ ငါသွားထိုင်တော့ သပွတ်အူထဲ ဆံချည်မျှင်တစ်ထွေး ငြိပါလာသေးတယ်ဆိုရင် ငါ ပလီရာကျမလား။ ငါ့ရှေ့က စပိဘုတ်က တော်တော်နှေးတာပဲ။ သူ့နာမည်ထဲပါနေတဲ့ speed ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှ အားမနာ။ မြွေကိုပခြုပ်ထဲထည့်ထားသလို မြစ်ကိုအနားသတ်ထားတာ ဘယ်သူ့ လက်ချက်လဲ။ အပိုးကျိုးနေတဲ့မြွေတွေက အပိုးကျိုးနေတဲ့မြစ်ထဲမှာတောင် ရေဆင်းမကူးရဲတော့တာ ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။ မြစ်မှာ ကမ်းရှိတယ်။ လမ်းမှာ နှုတ်ခမ်းရှိတယ်။ ပန်းခြံက အကာအရံနဲ့။ နိုင်ငံ မြို့ ရွာတွေက နယ်နိမိတ်တွေနဲ့။ ကမ္ဘာကြီးမှာတောင် အနားသတ်မျဉ်းတွေနဲ့၊ စကြာဝဠာကတော့ သူ့အပေါ်ကွမ်းတံတွေးထွေးလို့ မရသေးတာတစ်ခုနဲ့ပဲ လူတွင်ကျယ်ပေါ့။ သေချာတယ်။ ဒီကောင့်မှာလည်း စည်းရှိမှာပဲ။ တွေ့တဲ့တစ်နေ့မှ အဲဒီစည်းပေါ်တည့်တည့်ကို ကွမ်းတံတွေးထွေးကြည့်ဦးမယ်။ စည်းတွေ မရှိရဘူးလား။ စည်းတွေမရှိရင် စည်းဖောက်သူတွေ ဘယ်ရှိတော့မလဲ။ ငါ ထော်လော်ကန့်လန့် တွေးတယ်။ ငါ့နှုတ်ခမ်းငါကိုက်တာ တစ်ပါးသူပါးကို ရိုက်တာမှမဟုတ်ဘဲ။ လူမိုက်ပါ။ သူ့ဆင်ခြေနဲ့ သူနေတယ်။ အိမ်ခြေယာခြေမဲ့သလို ခံစားမှုမဲ့ရင် ကောင်းမယ်။ ဒါဆို ခံစားမှုခြေသလုံးအိမ်တိုင် လုပ်ပစ်မယ်။ လာထား..၊ အမြစ်မတွယ်တဲ့သစ်ပင် ဘယ်မှာအမြစ်ကျွတ်မလဲ။ နံပြားဖိုကြီးလို တရှိန်းရှိန်းပူလောင်ခဲ့ရတာကို ငါကြောက်တယ်။ ဒီနေရာမှာ သေပေါ့လို့ ပြောမယ်။ သေပေါ့၊ ပြောရတာအရသာတွေ့တယ်။ ခံတွင်းလည်းလိုက်တယ်ဆိုရင် ပြောလိုက်ပါ၊ သေပေါ့...လို့။
သေပေါ့။ စကြာဝဠာကြီးတောင်ကွေးနေမှပဲ၊ အာကာသကြီးတောင် ကွေးနေမှပဲ။ အကွေးစကြာဝဠာကြီးထဲ အကွေးအာကာသကြီးထဲ ငါလိုကောင်တစ်ကောင်ကွေးနေတာ ဘာဆန်းလဲ...သေပေါ့။ လက်ထိပ်မှာ လိပ်ပြာအကောင်တစ်သိန်းလောက်မွေးပြီး ကိုယ့်စကားလုံးတွေနဲ့ကိုယ် အပင်းဆို့ပြီး သေပေါ့။ လွမ်းစရာလည်းမဟုတ်၊ စခန်းသာလည်းမဟုတ်။ ဆဲလို့လည်းမရ တည်းလို့လည်းမရ။ ဘ၀ဆိုတဲ့အခွံကို ခဏကောက်စွပ်လာတဲ့မောင်၊ ချွတ်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာသာ လျှော်ဖွပ်ပြီးသားဖြစ်ဖို့ မမေ့လေနဲ့။ သေပေါ့...။
Posted by ညိမ်းညို at 15:384comments Links to this post
ကုပ်ချောင်းချောင်းကုတင်လေးပေါ် ကျောခင်းဖို့ အဆောင်ကိုပြန်မှဖြစ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ သင်နေရတဲ့စာတွေကို မကျေနပ်ဘူး။ လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့လူတွေက လိုတာထက် ပိုရီနေကြတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံက ဘာဖြစ်လို့ ပိုစတာကို အမြင့်ကြီးမှာ ချိတ်ထားရတာလဲ။ ဘာမှမမြင်ရတော့ ဘာမှမသိရတော့ဘူး။ ဘာမှမသိရတော့ မကောင်းဘူးလား၊ ကောင်းတယ်။ ကျေနပ်လား၊ မကျေနပ်ဘူး။ နိမ့်နိမ့်လေးချိတ်ထားပြန်ရင်လည်း ကျေနပ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာနေပြန်တယ်။ ကတ္တရာစေးအောက်က မြေကြီးတွေကို ခြေထောက်နဲ့ နင်းတယ်။ ကြားကနေ ဖိနပ်ကလည်း ၀င်နင်းတယ်။ ဘေးမှာ ကုန်တိုက်ကြီးတွေက စပ်ဖြဲဖြဲအရောင်တွေနဲ့ ကြောင်စီစီရပ်နေကြတယ်။ မဟုတ်သေးဘူး။ နောက်ကနေ တကောက်ကောက်လိုက်လာကြတာ။ တောအုပ်ထဲဖြတ်ဝင်လိုက်တော့မှ ဒင်းတို့ ငေါင်စင်းစင်းကျန်ခဲ့ကြတယ်။ နေခဲ့ပေါ့၊ ကျန်ခဲ့ပေါ့။ လေပြေကိုကြောက်တဲ့ကောင်တွေ၊ ရွက်စိမ်းဖားဖားကိုလန့်တဲ့ကောင်တွေ။
လက်မောင်းကကြောက်ဆေးက ငယ်တုန်းကအတိုင်း ထထအော်နေတုန်းပဲ။ မဖြစ်ဘူး၊ လက်ဖျံထဲ အကြောဆေးနှစ်လုံးလောက်တော့ ထိုးသွင်းရမယ်။ တောအုပ်ကလည်း အထဲရောက်လေ မစွံဘူးဆိုတာ ပိုသိရလေပဲ။ သစ်ရွက်တွေ ဒီလောက်ကြွေနေတာကိုက စော်ကားခြင်းတစ်မျိုးပဲ။ ကုန်းကောက်လိုက်တော့ ရှားပါးဒုတ်တိုတစ်ချောင်း လက်ထဲရောက်လာတယ်။ ကံဆိုးပြီ။ ပစ်စရာခွေးက တစ်ကောင်တစ်မြီးမှ ရှိမနေဘူး။ ရှိနေရင်ရော၊ ပစ်မှာလား။ ခွေးတစ်ကောင်ကိုဒုတ်နဲ့ပစ်ဖို့ ကလာပ်စည်းလေးတစ်ခု အမှုန်လေးတစ်မှုန်ကတောင် ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ ရီစရာပါလား။ မသာရှင်ကို နှစ်သိမ့်သလိုပြောလိုက်ရမှာလား။ ရီချင်ရင် ရီလိုက်လေ၊ ရီလိုက်...ရီလိုက် အောင့်မထားနဲ့...လို့။ ရီချလိုက်တယ်။ ၂လစာလောက်ကြီးကို back date နဲ့ ရီချလိုက်တယ်။ အတိုအစတွေစုထည့်ထားတဲ့ စုဗူးကိုထုခွဲရိုက်ခွဲလိုက်သလို ရီစရာအတိုအစတွေကို အန်ထုတ်လိုက်တယ်။ လူကြီးရှေ့မှာ မြိုသိပ်ထားရတဲ့ ရုံးအကူကောင်လေးက သူပိုင်အခန်းငယ်ထဲရောက်မှ အတိုးနဲ့ တခွီးခွီးရီချသလို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ရီချလိုက်တယ်။
အား!!! (ရင်ခေါင်းထဲမှာပဲ ဒီအသံက လှိုဏ်သံပေါက်ပြီး ပဲ့တင်ထပ်နေတယ်။ အပြင်ကို တစ်စက်မှ ထွက်မလာဘူး)
အထူးအဆန်းတစ်ခုလိုပဲ အံ့သြနေတယ်။ တုန်လှုပ်နေတယ်။ ထိတ်လန့်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရီကြည့်ဖို့ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးစားနေတုန်းပဲ။
တကယ်တော့ မထူးဆန်းလှပါဘူး။ လူဟာ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးတဲ့အခါ ရီလို့တောင်မရတော့တဲ့အကြောင်း သူမသိသေးလို့ ဖြစ်မှာပါ။
Posted by ညိမ်းညို at 14:377comments Links to this post
မီးလောင်နေတဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုက တချိန်မှာ လူအများကိုအေးရိပ်ပေးနိုင်ချင်ပါသေးတယ်
Posted by ညိမ်းညို at 04:485comments Links to this post
တစ်နေ့ သူ ထွက်ခွာသွားချင်သွားဦးမှာ
Posted by ညိမ်းညို at 04:483comments Links to this post
အမြဲတစေ ဆိပ်ကမ်းနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရာ။
- တစ်ခါတင်ဖူးပါတယ်။ လွမ်းလို့ ပြန်တင်ပါတယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 23:305comments Links to this post
какое зло следствие!
меня сгорал свет,
который я хочу видеть.
Posted by ညိမ်းညို at 22:09 1 comments Links to this post
The Light မဂ္ဂဇင်း(လ၊ ခုနှစ် မမှတ်မိပါ)
Я хочу быть звёздой
В пустом небе
Мой спящий город и
Мой сон домой,
Я хочу падать тихо
Всякий раз, когда я не могу управлять.
Posted by ညိမ်းညို at 23:406comments Links to this post